HomeWararka CaalamkaErdogan oo Sweden iyo Finland u sheegay Sharuudaha uu Dalkiisa Doonayo
May 22, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Finland, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa madaxda dalalka Sweden, Finland iyo NATO kala hadlay shuruudaha Turkiga ku xiray dalalka Waqooyiga Yurub inay galaan NATO.
Horaantii todobaadkan, Erdogan wuxuu sheegay inuu diidayo inuu qaabilo wufuudda Sweden iyo Finland ee Turkiga. Laakiin Sabtidii, wuxuu wadahadalo gooni gooni ah la yeeshay labada Ra’iisul Wasaare Magdalena Andersson iyo Madaxweyne Sauli Niinistö.
Wadahadal dhanka taleefanka ah oo uu la yeeshay Xoghayaha Guud ee Jens Stoltenberg isla maalintaas, Erdogan wuxuu ku celiyay shuruudihiisa ku aaddan inuu iftiinka cagaaran siiyo codsiyada waddamada Waqooyiga Yurub, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha.
“Haddii aysan Sweden iyo Finland si cad u muujin inay garab istaagi doonaan Turkiga arrimaha aasaasiga ah, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada, ma ahaan doono mid aan u hiilin doonin xubinimada NATO ee dalalkan ” ayuu yiri Erdogan.
Dhammaan 30ka waddan ee xubnaha ka ah NATO waa inay ku heshiiyaan haddii xubno cusub ay ku biirayaan isbahaysiga.
– Waxaan ku heshiinnay in dhammaan dhibaatooyinka amniga ee waddamada xubnaha ka ah ay tahay in la tixgeliyo, iyo in aan sii wadno wadahadallada xal loogu raadinayo, ayuu Jens Stoltenberg ku soo qoray Twitter .